Mombamomba ny orinasa | Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Novokarin'ny ekipa mpamolavola multinational kilasy manerantany miaraka amin'ny traikefa 50 taona bebe kokoa amin'ny sensor CMOS-MEMS sy ny famolavolana dingana, Sunshine dia manolotra tombony ho an'ny mpanjifa tombony lehibe amin'ny fampisehoana, ny habeny ary ny fampidirana azy. Ny vokatra IR sensor miaraka amina teknika fototra COMS-MEMS ary tena azo itokisana sy tsy fitoviana dia ahitana sensor tsy mifandraika amin'ny mari-pana, sensor NDIR, sensor sary mafana, ary koa ny fifandraisan'ny masinin'olombelona IR.
Ny Sunshine dia mitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanjifa sy ny fahaiza-manao ara-teknika amin'ny vokatra sy vahaolana amin'ny fahitana IR mba hahatonga ny mpamolavola endrika ho mora azo sy mora ary mora vidy. Ny vokatra Sun sensor sensor IR vaovao miaraka amina portfolio midadasika dia mamela ny mpanjifa hahatratra tsena mitombo isan-karazany sy haingam-pandeha toy ny fitaovana marani-tsaina, elektronika finday ary teknolojia angovo maitso, ary nahatonga ny fanatsarana ny fahombiazana toy ny fahitsiana tsara kokoa, ny singa kely kokoa amin'ny peripheral, ny habaky ny rafitra kely kokoa ary vidiny ambany.
Ny fahaizan'ny Sunshine famolavolana sy ny fampiasam-bola mitohy amin'ny R&D dia manome toky ny fahombiazan'ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra na mihoatra ny an'ireo mpamatsy sensor IR manerantany. Ny kalitao sy ny fahamendrehana dia eo an-tampon'ny lisitra laharam-pahamehana amin'ny Sunshine amin'ny fotoana rehetra. Ny Sunshine dia miezaka ny ho tonga iray amin'ireo mpamatsy sensor IR manerantany amin'ny alàlan'ny fanolorana ny mpanjifa vokatra sy serivisy kalitao tsara indrindra. Izany no politika raha toa ny Sunshine manatsara hatrany ny teknolojika sy ny rafitra fiasanay amin'ny ezaka mitohy hihaona sy hihoatra ny andrasan'ny mpanjifa.